Vaovao - Ny tombony ara-toekarena sy tontolo iainana amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray BY RICK LEBLANC
Ny tombony ara-toekarena sy tontolo iainana amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray BY RICK LEBLANC
Ity no lahatsoratra faharoa amin'ny andian-dahatsoratra telo nataon'i Jerry Welcome, filohan'ny Fikambanana Reusable Packaging Association. Ity lahatsoratra voalohany ity dia namaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny anjara toerany amin'ny rojom-panomezana. Ity lahatsoratra faharoa ity dia miresaka momba ny tombony ara-toekarena sy ara-tontolo iainana amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray, ary ny lahatsoratra fahatelo dia hanome masontsivana sy fitaovana hanampiana ireo mpamaky hamantatra raha mahasoa ny fanovana ny fonosana fitaterana indray mandeha na voafetra ampiasaina amin'ny orinasa iray rafitra fonosana fitaterana azo ampiasaina indray.
Na dia misy tombony lehibe aza ny tontolo iainana mifandraika amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray, ny ankamaroan'ny orinasa dia miova satria mamonjy vola azy ireo. Ny fonosana fitaterana azo ampiasaina dia mety hampitombo ny faran'ny orinasa amin'ny lafiny maro, ao anatin'izany:
Fanatsarana ny ergonomika sy ny fiarovana ny mpiasa
• Ny fanafoanana ny fanapahana boaty, ny foto-tsakafo ary ny papaly vaky, mampihena ny ratra
• Fanatsarana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fametahana ergonomia sy ny varavarana fidirana.
• mampihena ny ratra amin'ny lamosina miaraka amin'ny habe sy lanjany mavesatra.
• Fanamorana ny fampiasana ny valizy fivarotana, ny fitoeran-drakitra, ny fantsom-pifamoivoizana ary ny fitaovana fampiakarana / fitongilana misy kaontenera voalamina
• Fampihenana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fahalavoana amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fako ao anaty zavamaniry, toy ny fitaovana fonosana very.
• Ny fahasimban'ny vokatra kely kokoa dia mitranga noho ny tsy fahombiazan'ny fitaterana entana.
• Ny fandefasana kamiao sy ny fampidinana dock mahomby kokoa dia mampihena ny vidiny.
• Ny kaontenera misy rivotra dia mampihena ny fotoana fihenan'ny fahaverezana, ny fitomboan'ny fihavaozana ary ny fiainana amin'ny talantalana.
Fampihenana ny vidin'ny fitaovana fonosana
• Ny fiainana maharitra ilaina amin'ny famonosana fitaterana azo ampiasaina indray dia miteraka fandaniana amin'ny fonosana denaria isaky ny dia.
• Ny vidin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina dia azo aparitaka mandritra ny taona maro.
Mihena ny vidin'ny fitantanana ny fako
• Fako kely kokoa hitantanana ny fanodinana na fanariana.
• Ny asa kely kokoa dia takiana amin'ny fanomanana fako ho an'ny fanodinana na fanariana.
• Mihena ny vidin'ny fanodinana na fanariana.
Mahazo tombony ara-toekarena ihany koa ny tanàna eo an-toerana rehefa mivadika fonosana fitaterana azo ampiasaina indray ny orinasa. Ny fihenan'ny loharano, ao anatin'izany ny fampiasana indray, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanariam-pako sy ny fikirakirana ny vidiny satria izy io dia misoroka ny vidin'ny fanodinana, ny fanaovana composting ny tanàna, ny fanotofana tany ary ny fandoroana.
Tombony ho an'ny tontolo iainana
Reuse dia paikady mety hanohanana ny tanjon'ny orinasa maharitra. Ny foto-kevitra momba ny fampiasana indray dia tohanan'ny Sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana ho fomba iray hisorohana ny fako tsy hiditra amin'ny fako. Araka ny www.epa.gov, “Ny fihenan'ny loharano, ao anatin'izany ny fampiasana indray, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanariam-pako sy ny fikirakirana ny vidiny satria izy io dia misoroka ny vidin'ny fanodinana, ny fikajiana tanànan'ny tanàna, ny fanotofana tany ary ny fandoroana. Ny fihenan'ny loharano koa dia miaro ny enti-manana ary mampihena ny fandotoana, ao anatin'izany ny gazy entona izay mandray anjara amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny tany. ”
Tamin'ny taona 2004, ny RPA dia nanao fanadihadiana momba ny Kitapo Fiainana niaraka tamin'i Franklin Associates handrefesana ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ireo kaontenera azo ampiasaina indray mifanohitra amin'ilay rafitra lafo lany amin'ny tsenan'ny vokatra. Fampiharana vokatra vaovao 10 no nodinihina ary ny valiny dia naneho fa ny fonosana azo ampiasaina amin'ny salanisa dia mitaky angovo 39% latsaka, namokatra 95% fako kely kokoa ary niteraka 29% latsaka ny entona entona entona. Ireo valiny ireo dia notohanan'ny fanadihadiana maro taty aoriana. Amin'ny ankabeazan'ny fampiharana, ny rafitra fitaterana azo ampiasaina azo ampiasaina dia miantraika amin'ny fiantraikan'ny tontolo iainana manaraka ireto:
• Mila ahena ny fananganana trano fanariana lafo vidy na fanariam-pako betsaka kokoa.
• Manampy amin'ny tanjona kendrena amin'ny fanodinana fako sy fanjakana.
• Manohana ny fiarahamonina eo an-toerana.
• Amin'ny faran'ny androm-piainany mahasoa, ny ankamaroan'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina dia azo tantanana amin'ny alàlan'ny fanodinana plastika sy vy mandritra ny fikosehana ny kitay ho an'ny mulch an-tany na fandriana fiompiana.
• Mihena ny etona entona entona ary ny fanjifana angovo amin'ny ankapobeny.
Na ny tanjon'ny orinasanao dia ny hampihenana ny vidiny na hampihena ny dian-tongotrao, ny fonosana fitaterana azo ampiasaina dia mendrika jerena.